खाडी देशहरुमा कोरोना संक्रमणको अवस्था के छ ? « LiveMandu
खाडी देशहरुमा कोरोना संक्रमणको अवस्था के छ ?
१६ चैत्र २०७६, आईतवार १४:०२
२८ जना संक्रमीत संख्या बाट केहि दिनमा नै ५९० पुगेको कतारले शनिवारको दिन पहिलो कोरोना संक्रमणबाट आफ्नो देशमा मृत्यु भएको केस दर्ज गरेको छ ।
स्वास्थ मन्त्रालयले एकजना ५७ वर्षिय बंगलादेशी मुलका कतारमा बस्ने मानिसको श्वाँसप्रश्वास समस्याले मृत्यु भएको र तिनमा कोरोना पोजिटिभ भएको बताएको छ । साउदी अरबले पनि शनिवारको दिननै ९९ जना मा संक्रमण र १ जनाको मृत्यु केस दर्ज गरेको छ , यसका साथै अब साउदीमा ४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । मध्यपूर्वका यि देशहरु पनि अब कोरोना बिछोडबाट पर रहन सकेनन्, यूएईमा ६३ वटा फ्रेश केसहरु, ओमनमा २१ र कुवेतमा १० संक्रमणका केसहरु देखिएका छन् ।
यसका साथै साउदीमा १२०३ वटा केसहरु, ४६८ यूएईमा, ४५७ वहराइनमा, २६५ कुवेतमा र ओमानमा १५२ कोरोना संक्रमणका केसहरु पाइएका छन् । यूएईमा २ जना र वहराइनमा ४ जना सहित गल्फ कोअपरेशनमा देशहरुमा कोरोना मृत्युका ११ केसहरु दर्ज भएका छन् । साउदी अरबले मदिना आसपासका राज्यहरुमा करफ्यू समय बढाएको छ, शनिवार यस्ते घोषणा जारी गरिएको छ ।
त्यहाँ करफ्यू तोड्नेलाई १०,००० रियालसम्म जरिवाना र पटकपटकसम्म नियम तोडेमा कारावासको प्रावधान पनि जारी गरेको छ । विशेषत मक्का मदिना क्षेत्रमा साउदी करफ्यूको प्रभाव केन्द्रित छ भनें लगभग खाडी देशहरुमा सबै मूल शहरहरु अहिले बन्द अवस्थामा छन् । कतारमा पनि अधिकांश कम्पनीहरु बन्द गरिएका छन् भनि कामदारहरुलाई आफ्ना वसोवासमा नै बस्न निर्देशन दिइएको छ ।
हैदराबाद(एएनआई) – भारतको औषधि नियामक निकायले कोभिड–१९ विरुद्धको रुसी स्पुतनिक भी खोप आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएसँगै भारतीय बजारमा बिक्री
जन्डिसका बिरामीले जस्तै जता पनि पहेँलो देख्ने प्रवृत्ति देखा पर्‍यो: प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको राजनीतिमा जन्डिसका बिरामीले जस्तो जता पनि पहेँलो देख्ने प्रवृत्ति देखा परेको बताएका छन् । शुक्रबार
नेपाललाई सहयोग गरिदिन अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग कांग्रेसको आग्रह
काठमाडाैं‌ । नेपाली कांग्रेसले विषम अवस्थामा नेपाललाई सहयोग गरिदिन मित्रराष्ट्र र अन्तरराष्ट्रिय संघ, संस्थाहरूलाई आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार विज्ञप्ति